အက်ဒရီယာတစ် ပင်လယ်ထဲက ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့ ဒိုင်ဗင် ဓါတ်ပုံ – Digital Photography Myanmar
HomeInspirationအက်ဒရီယာတစ် ပင်လယ်ထဲက ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့ ဒိုင်ဗင် ဓါတ်ပုံ
June 18, 2016 Jedi Inspiration 0
Orlando Duque dives at the Red Bull Cliff Search Croatia at island "Vis" , Croatia
နာမည်ကျော်ကြားပြီးသား အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Red Bull Photography ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းထဲကို ပူးပေါင်းလာခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ဒီပူးပေါင်းမှုဟာ အံ့မခန်း ဓါတ်ပုံပညာတင်မကပါဘူး နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ Red Bull Photography ရဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံစီ နောက်ကွယ်မှာ ပါရမီရှင် ဓါတ်ပုံဆရာ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းနှင့် သင်ခန်းစာအချို့ကိုပါ သင်ယူခဲ့ရတာပါ။
အက်ဒ်ဒရီရေးတစ် ပင်လယ် ဗစ်စ်ကျွန်းပေါ်က ရေငုတ်သငေ်္ဘာကျင်းတစ်ခုမှာ ကျောက်ဆောင် ဒိုင်ဗင်ထိုးသူတစ်ဦးရဲ့ သာမန်နဲ့ မတူညီကွဲပြားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ခဲ့ရပြီး လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာ သို့လောသို့လော ဖြစ်ပြီးသကာလမှာတော့ မာယန် ရာဒိုဗစ် ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အလန်းစား ဓါတ်ပုံကိုဘယ်လိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံ နဲ့ အတူ မာယန်ရဲ့ အခြား ဓါတ်ပုံကောင်းတွေကိုကြည့်ရဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Orlando Duque dives at the Red Bull Cliff Search Croatia at island “Vis” , Croatia
” ဒါဟာ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသား Red Bull အားကစားသမား အော်လန်ဒို ဂျူကေး ရဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။” ဂျူးကေးက ယနေ့ ကျောက်ဆောင်ဒိုင်ဗင်ထိုးကစားသမားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီကစားနည်းကို စပြီး ကစားခဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ရဲ့ FINA ကမ္ဘာ့ ဒိုင်ဗင်ချန်ပီယံလည်းဖြစ်သလို Red Bull ကမ္ဘာ့ကျောက်ဆောင် ဒိုင်ဗင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဒုတိယ ရခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က အသက် ၄၀ ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း အော်လန်ဒိုကတော့ သူ့ရဲ့ ကာယနဲ့ စိတ်စွမ်းအာင် ခံနိုင်ရည်ကို ဆက်လက်ပြီး စမ်းသပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံမရိုက်ခင် အချိန်တွေမှာကတည်းက ဒီလူနဲ့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ဖို့ အခွင့်ရေးရခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်” လို့ မာယန်က ဆိုပါတယ်။
မာယန်(ဘယ်) နှင့် အော်လန်ဒို (ညာ) www.marjanradovic.com
” သဘာဝအလှတွေကို ရှာဖွေဖို့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ဗစ်စ် ကျွန်းကို ဂျူကေး အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင် ဒိုင်ဗင်ထိုးဖို့ အခွင့်အရေးပေးနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကိုလည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်ဗင်ထိုးဖို့ ကျောက်ဆောင်ကောင်းတွေ ဗစ်စ်ကျွန်းမှာပြည့်နှက်နေတဲ့အပြင် နာမည်ကျော် လှပတဲ့ ဥမင်လှိုဏ်ဂူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ၄၅ ကီလိုအကွာအဝေးမှာတည်ရှိပြီး ခရိုအေးရှားရဲ့ အဝေးဆုံး ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ရာစုနှစ်ဝက်လောက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျွန်းအဖြစ် တိတ်ဆိတ်စွာ လဲလျောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျွန်းရဲ့ သီးခြားတည်ရှိမှုနဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အခြာကျမှုတို့ကြောင့် ခံတပ်တစ်ခုအဖြစ် ဗစ်စ်ကျွန်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို သာဓကအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အော်လန်ဒို ဂျူကေး နဲ့ မာယန် တို့ရေထဲက ရိုက်ကွင်း www.marjanradovic.com
” အော်လန်ဒို ဂျူးကေး ကို ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက် ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစာ နေ့ရက်တွေ ကျွန်တော်တို့ ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကတော့ အဲဒီဓါတ်ပုံတွေထဲက တစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံကို နီကွန် D3 ကင်မရာမှာ Aquatica ရေလုံဘူးတပ်ပြီး ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နီကွန် 16mm f2.8 Fisheye မှန်ဘီလူးနဲ့အတူ ၈လက်မ အရွယ် Dome ကို ကင်မရာရဲ့ ဝင်ရိုးနဲ့ လုံလောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာထားပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာတင် နှစ်ပိုင်းခွဲထွက်နေသလိုမျိုါ်ကို ဖန်တည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ ရေအောက်ဓါတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော် သဘာဝအလင်းရောင်းပဲ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေ့ကတော့ မိုးအုံ့နေခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။
” ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ မိုးသည်းသည်းမဲမဲရွာလာတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့တဖွဲ့လုံး အစီအစဉ်ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုပုံထွက်လာမယ်ဆိုတာ သိပ်မသေချာခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ နာမည်ကျော်နိုင်မယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရလာတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ရလာတဲ့ဓါတ်ပုံကို အခြေခံတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အရောင်ညှိခြင်း နဲ့ အလင်းရောင် ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဓါတ်ပုံကိုဘယ်လိုရိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သိချင်ရင်တော့ မာယန်နဲ့ အင်တာဗျူးကို ဆက်ပြီးဖတ်လိုက်ပါ။
500px: ခင်ဗျား ဓါတ်ပုံပညာကို ဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲဗျာ?
မာယန်: ကျွန်တော် ဇာဂရက် တက္ကသိုလ် ပထဝီဌာနမှာ ကျောင်းတက်နေစဉ်ကတည်းက ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အားကစားတွေကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက အားကစားကို ခုံမင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ရေအောက်အားကစားနည်းတွေပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ အားကစားသမားရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားထုတ်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်နိုင်စွမ်းကို ခုံမင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ အားကစားဓါတ်ပုံပညာမှာ စတင်ပြီး ခုံမင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Red Bull ရဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ?
Red Bull အားကစားသမားဟောင်း တဖြစ်တလဲ အားကစား မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ ဂျူရီကာ ဘာရက်က ကျွန်တော့်ကို Red Bull အသင်းကို ဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ သူ အားကစားလုပ်ခဲ့ချိန်တုန်းက ကျွန်တော် သူ့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ပြင် တခါလေတောင်မှ သူနဲ့ စွန့်စွန့်စားစား အားကစားပွဲတွေမှာ တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။
ခင်ဗျားဒီလိုဓါတ်ပုံတွေထွက်ရိုက်ဖို့ ဘယ်သူ့ကို အားကျခဲ့ပါလဲ?
ကျွန်တော် အားကစားနဲ့ ရေအောက် ဓါတ်ပုံပညာကို ခုံမင်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ စိတ်ခေါ်မှုတွေကို ကျွန်တော် မြတ်နိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုယ်ခံပညာ၊ ရေငုပ်ခြင်းနဲ့ နှင်းလျှောစီး နည်းပြဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်မှာ အားကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်မျိုးရှိတာပေါ့။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ခြင်း နဲ့ ဖိအားတွေအောက်မှာနေထိုင်ရခြင်းစတာတွေကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ထူးခြားကွဲပြားတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပရောဂျက်တွေဆိုရင် ကျွန်တော့အတွက် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အရာအားလုံးက ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းကိုစောင့်ဖမ်းရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒီလိုမျိုးအရာတွေအတွက် ဖော်ပြနိုင်ဖို့ စကားလုံးမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက ရေထဲက အားကစားနည်းတွေပါ၊ တခြားအားကစားနည်းအားလုံးကိုလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ ရေအောက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော့အိမ်ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်။ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကတော့ နှင်းလျှောစီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အခြားသော ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရဖို့ မာယန်ရဲ့ 500px နဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website မှာသွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကိုးကား။ ။Klassy Goldberg ရဲ့ Photographer Captures An Epic Cliff Dive in the Adriatic Sea ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။